हिमाल खबरपत्रिका | एसएलसी दिने प्रथम चार महिला
एसएलसी दिने प्रथम चार महिला
नारी शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको राणाकालमा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका चार महिलाले प्रवेशिका परीक्षा दिएका थिए।
वि.सं. १९८७ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या रहेछ, ५५ लाख ३३ हजार ५६४ । त्यसबेला नारी साक्षरता कति प्रतिशत थियो भन्ने तथ्याङ्क भेटिंदैन । तथ्याङ्क नपाइए पनि राणाकालीन नेपालमा महिलाहरू विद्यालय जाने चलन नरहेको तथ्य नौलो होइन । पढ्ने महिलाहरू अलिअलि थिए, जसले घरमै बन्दोबस्त मिलेर पढ्न पाएका हुन्थे । अधिकांशमा स्वस्थानी व्रतकथा पाठ गर्न सक्ने आकांक्षा हुने भएकाले महिलाले त्यति भन्न सके पर्याप्त मानिन्थ्यो ।
राणा शासकहरूकहाँ भने पत्यारवाला पण्डितहरूबाट छोरासँगै छोरीलाई पनि दरबारमै पढाइँदो रहेछ । कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भीमशमशेर र तेजशमशेरकहाँ गएर केटाकेटीलाई पढाएका रहेछन् । त्यो परिस्थितिमा जनताका छोरीचेलीले विद्यालय शिक्षाको भर्‍याङ उक्लिंदै प्रवेशिका परीक्षा दिनु चानचुने कुरा थिएन । २००४ सालमा प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी हुनेमा चार छात्रा पनि थिए ।
ती ऐतिहासिक महिला
वि.सं. २००४ मा पहिलो पटक चार जना महिलाले प्रवेशिका परीक्षा दिए । उतिबेला एसएलसी परीक्षालाई प्रवेशिका भनिन्थ्यो । नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना भएपछि परीक्षा दिने प्रथम चार महिला थिए– साधना प्रधान, साहना प्रधान, अंगुरबाबा जोशी र भुवनसिंह ।
परीक्षा दरबार स्कूलमा भएको थियो । राजा महेन्द्रका प्रमुख सचिव लोकदर्शन बज्राचार्यले संस्मरणात्मक पुस्तक जीवनका पानाहरू मा लेखेका छन्, “ती महिलाहरू दरबार स्कूलको परीक्षा हलमा आउँदा बाटोभरि युवाहरू लाइन बसी हेर्थे । तीमध्ये अंगुरबाबा जोशी उलिनकाठमा बसी छाता ओढेर परीक्षास्थल आउँथिन् ।” कति जनाले परीक्षा दिएका थिए भन्ने नखुले पनि उक्त वर्षको प्रवेशिकामा ८४ जना उत्तीर्ण भएछन् । परीक्षामा भवानीशंकर राजवंशी बोर्ड फस्ट भएका थिए । इतिहासमै पहिलो पल्ट चार महिला प्रवेशिका परीक्षामा सम्मिलित भई कीर्तिमान कायम गरे ।
नेपालमा नारी शिक्षाको जग कमजोर रहेको अवस्थामा ती चार महिला कसरी प्रवेश परीक्षा दिने तहसम्म पुग्न सफल भए त ? परीक्षामा सहभागी भएका चार जनामध्ये साधना र उनकी बहिनी साहना बर्मामा हुर्केका हुन् । उनीहरूको परिवार दोस्रो विश्वयुद्धको बेला भागेर नेपाल आएको थियो । शिक्षाको जग उतै बनेकाले नै २००४ सालमा उनीहरूले यहाँ परीक्षा दिने हिम्मत गरे । अंगुरबाबा जोशीले बुहारी भए पनि विभेदकारी परम्परा विरुद्ध साहसिलो कदम चालिन् । उनले उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर समेत अध्ययन गरी पद्मकन्या कलेजको सञ्चालनमा नेतृत्व समेत गरिन् । साहनाले त धेरै पल्ट मन्त्री हुनुका साथै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व समेत गरिन् ।
नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना अघि भारतको विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर म्याट्रिकुलेशन अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गरिन्थ्यो । अझ्, त्यसभन्दा पनि अगाडि त म्याट्रिकुलेशन परीक्षा दिन भारत पुग्नुपथ्र्यो ।
म्याट्रिकुलेशन परीक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीले वि.सं. १९८५ अगाडिसम्म भारतको कलकत्ता वा पटना जानुपथ्र्यो । परीक्षा दिन जाने सबै विद्यार्थीको खर्च सरकारले बेहोर्दो रहेछ । पछि कलकत्ताको तुलनामा दूरी र खर्च कम पर्ने हिसाबले नेपाली विद्यार्थी परीक्षा दिन केही वर्ष पटना गए ।
म्याट्रिकुलेशन परीक्षाका लागि दरबार हाईस्कूलबाट टेस्ट परीक्षा पास गरेपछि कलकत्ता विश्वविद्यालयको इन्ट्रान्स परीक्षा पास गर्नुपथ्र्यो । एक अभिलेख अनुसार, कलकत्तामा म्याट्रिकुलेशन परीक्षाको इन्ट्रान्स दिने शासक वर्गका राणाहरूमध्ये पहिलो व्यक्ति धीरशमशेरका छोरा खड्गशमशेर हुन् । तर, इन्ट्रान्समै उनी फेल भएछन् । तैपनि राणा सरकारले उनलाई तक्मा दिएर सम्मान गरेछ । राणा परिवारमा म्याट्रिकुलेशनको इन्ट्रान्स पास गर्ने पहिलो व्यक्ति चन्द्रशमशेर रहेछन् ।
वि.सं. १९८५ मा काठमाडौंमै ‘म्याट्रिकुलेशन परीक्षा केन्द्र’ खुल्यो र पटना विश्वविद्यालय मातहत यहीं परीक्षा सञ्चालन हुन थालेपछि भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो । वि.सं. १९९० मा नेपालमा एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गर्‍यो, तर परीक्षासम्बन्धी सबै प्रक्रिया नेपाल सरकारका लागि पटना विश्वविद्यालयले नै जारी राख्यो ।
९० सालमा दरबार हाईस्कूल नजिकैको भवनमा पुस अन्तिम सातादेखि प्रवेशिका परीक्षा हुन थाल्यो । तर, परीक्षा चलिरहँदा २ माघमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण बीचैमा स्थगित भएछ । यसपछि बाँकी परीक्षा १९९१ जेठमा सदर टुँडिखेलको खुला मैदानमा गरिएछ । सो परीक्षामा भक्तपुरका पुष्पभक्त मल्ल प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएछन् । पछि उनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका डाइरेक्टरसम्म भए ।
२००३ सालदेखि नेपाल सरकार आफैंले प्रवेशिका परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि पटना विश्वविद्यालयको मातहत परीक्षा हुने व्यवस्था तोडियो ।